Accueil > Gazetin'ny nosy > Filohan’ny Senatera
Rivo Rakotovao no hisolo toerana ny filoham-pirenena
Vita ny asa nampanaovin’ingahy Hery Rajaonarimampianina an’ingahy Honoré Rakotomanana izay filohan’ny antenimierandoholona. “Mba hitandrona ny fihavanana sy ny tombotsoa ambonin’ny firenena dia hametram-pialana aho” hoy ingahy Honoré Rakotomanana raha nihaona tamin’ny mpanao gazety izy ary teo anatrehan’ny mpikambana tao amin’ny antenimierandoholona ity ny talata faha 31 oktobra 2017, tetsy amin’ny lapa maitso tetsy Anosy.
Voalaza fa nisy ny fihaonan’ingahy Honoré Rakotomanana tamin’ny filohan’ny repoblika Hery Rajaonarimampianina tao alohan’io fametraham-pialanany io. Hatramin’izao dia tsy misy nipika ny resak’izy roa lahy ireo. Ny fantatra dia tamin’ny alatsinainy faha 23 oktobra 2017 no nandray ny toerana maha senatera azy ingahy Rivo Rakotovao, izay minisitrin’ny fambolena teo aloha. Avy any Italy mihitsy ny nanendry azy ny filoham-pirenena ny herinandro tao alohan’io raha nanao fivoriana tany amin’ity firenena ity izy. Samy gaga sy talanjona avokoa ny mpanaraka ny vaovao rehetra nahita ity fanendrena ity. Tamin’io fotoana io koa no nahafantarana fa hosoloina an’ingahy Rivo Rakotovao izay filohan’ny HVM (Hery vaovao hoan’i Madagasikara) izay antokon’ingahy Hery Rajaonarimampianina ny filohan’ity andrimpanjakana ity.
Mandeha dia mandeha ny ady hevitra politika amin’ny raharaha momba ny fanovana ny andiany sasantsasany ao anatin’ny lalàmpanorenana izay nokasain’ingahy Hery Rajaonarimampianina ho tanterahana. Naviliny tany amin’ity resaka ity ny sain’ny Malagasy rehetra. Nangotraka dia nangotraka nefa ny ady hevitra amin’ny tsy faneken’ny Malagasy maro izany ka dia nivadika any amin’ny fanonganana an’ingahy Honoré Rakotomanana izao indray ny raharaha.
Raha ny tantara dia indroa nitazona ity toeran’ny filohan’ny antenimieran-doholona ity ingahy Honoré Rakotomanana. Ny iray voalohany dia ny taona 2000, nefa dia noesorin’ingahy Ravalomanana Marc teo amin’ny maha filoha azy izy tamin’izany ary mbola noesoriny tsy ho senatera koa. Amin’izao andron’ingahy Hery Rajaonarimampianina izao dia voafidy ihany koa izy araka ny baikon’ny filoham-pirenena nefa dia izao noesorina izao indray rehefa niasa iray taona mahery. Vita tanteraka izany ny andraikiny maha filoha azy.
Ny nifidianan’ny HVM azy ho filohan’ny antenimierandoholona dia somary nahagaga ihany satria tsy avy amin’io antoko maro an’isa io izy. Nambarany aza fa “ratsirakista” izy raha voafidy tamin’io toerana io, raha ny firehana politika no lazaina. Misy antony manokana avy any amin’ny fifandraisan’ingahy Didier Ratsiraka sy ingahy Hery Rajaonarimampianina koa ve izao fanesorana azy izao ? Ny mpanaraka ny raharaham-pirenena dia milaza fa kajikajy politika amin’ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny taona 2018 izao ataon’ingahy Hery Rajaonarimampianina sy ny HVM izao. Na izany na tsy izany dia tsy nahafaly ny mpanara-baovao maro ny fanesorana an’ingahy Honoré Rakotomanana tsy ho filohan’ny antenimierandoholona iny. Misy aza ireo senatera avy amin’ny antoko hafa no nilaza fa fanonganampanjakana no ataon’ny HVM izao. Midika zavatra maro amin’ny mety hisian’ny hosoka maro samy hafa amin’ny fifidianana no andraisan’ny maro ny raharaha ity. Izay midika izany fa hangotraka sy hafampana ny fifidianana amin’ny taona 2018 iny. Tetika efa maty paika ataon’ny HVM sy Hery Rajaonarimampianina ity raharaha ity mba hahazoan’ingahy Rivo Rakotovao mitantana ny firenena mandritry ny fifidianana amin’ny 2018 io. Ho hitantsika eo ihany ny tohiny satria maro ny resaka mandeha mahakasika azy ity izao.